Ntuziaka nke Atụmatụ Mkparịta ụka maka Chatbot gị - Site na Landbot | Martech Zone
Ntuziaka maka Atụmatụ Mkparịta ụka maka Chatbot gị - Site na Landbot
Na Mọnde, Nọmba 10, 2020 Na Mọnde, Nọmba 10, 2020 Douglas Karr
Ndị na-akparịta ụka na-aga n'ihu na-enwewanye ọkaibe ma na-enyekwa ọtụtụ ndị na-enweghị ahụmịhe saịtị maka ndị ọbịa karịa ka ha mere otu afọ gara aga. Nhazi mkparịta ụka bụ na obi nke ọ bụla nkata nkata chatbot… na ọdịda ọ bụla.
A na-etinye Chatbots maka ijide njide na iru eru, nkwado ndị ahịa na ajụjụ a na-ajụkarị (Ajụjụ), ịba ụgbọ ala, ndụmọdụ ngwaahịa, njikwa ọrụ mmadụ na nchịkọta, nyocha na nyocha, ntinye akwụkwọ, na ndoputa.
Ihe ndị na-atụ anya na ndị nleta na saịtị etolitela ebe ha tụrụ anya ịchọta ihe ha chọrọ ma kpọtụrụ gị ma ọ bụ azụmahịa gị mfe ma ọ bụrụ na ha chọrọ enyemaka ọzọ. Ihe ịma aka nye ọtụtụ azụmaahịa bụ na ọnụ ọgụgụ nke mkparịta ụka dị mkpa iji kpochapụ maka ezigbo ohere bụ obere - yabụ ụlọ ọrụ na-ejikarị ụdị ndu iji nwalee ohere ndị ha chere dị mma ma leghara ndị ọzọ anya.
Subdị nrubeisi usoro nwere nnukwu ọdịda, ọ bụ ezie na… omume oge. Ọ bụrụ n ’ị zaghị arịrịọ niile bara uru n’oge, ị na-enwezi azụmaahịa. N'ikwu eziokwu, ọ bụ nsogbu na saịtị m. Site na ọtụtụ puku ndị nleta kwa ọnwa, enweghị m ike ịkwado ịza ajụjụ ọ bụla - ego m na-enweta anaghị akwado nke ahụ. N'otu oge ahụ, amaara m na ọ na-efunahụ m ohere ndị nwere ike ịbata na saịtị ahụ.
Ike Chatbot na adịghị ike
Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ji etinye mkpokọta nkata. Ndị na-akparịta ụka nwere ike na adịghị ike, agbanyeghị:
Ọ bụrụ n ’ịgha ụgha na chatbot gị bụ nke mmadụ, onye ọbịa gị nwere ike ịchọpụta ya ma ị ga-atụkwasị obi. Ọ bụrụ n ’ị ga - achọ enyemaka nke bot, mee ka ọbịbịa gị mara na ha bụ bot.
Ọtụtụ nyiwe chatbot na-esiri ike iji. Ọ bụ ezie na ahụmịhe ndị ọbịa ha na-eche ihu nwere ike maa mma, ike ị wuo ma tinye bot nke bara uru bụ nro. Amaara m… M a teknuzu Ihọd na mmemme na ike chepụta ụfọdụ n'ime ndị a na usoro.
A ghaghị iji nlezianya nyochaa ma kpebie osisi ndị na-eme mkparịta ụka iji meziwanye ọnụego ntụgharị na bot gị. O zughi oke iti bot na a ole na ole iru eru ajụjụ - ị nwekwara ike dị nnọọ iji a ụdị, mgbe ahụ.
Ndị nkata kwesịrị itinye usoro nhazi asụsụ dị elu (NLP) iji ghọta ngwa ngwa na mmetụta nke onye ọbịa gị, ma ọ bụghị, nsonaazụ ya na-ewe iwe ma na-achụpụ ndị ọbịa.
Ndị na-akparịta ụka nwere oke, ha kwesịrị iji mkparịta ụka kparịta ụka gị na ndị mmadụ n'ezie na ndị ọrụ gị mgbe ọ dị mkpa.
Ndị na-akparịta ụka kwesịrị ịnye ahịa gị, ahịa gị, ma ọ bụ ndị ọrụ ndị ahịa gị data bara ụba site na ọkwa na njikọta na CRM ma ọ bụ nkwado sistemụ tiketi.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, akparịta ụka kwesịrị ịdịrị gị mfe itinye aka n'ime ma nwee ahụmịhe onye ọrụ pụrụ iche na mpụga. Ihe ọ bụla pere mpe ga-adaba. N’ụzọ na-akpali mmasị… ihe na-eme ka chatbot dị irè bụ otu ụkpụrụ ndị na-eme ka mkparịta ụka dị n’etiti mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa.
A maara nkà nke ịmepụta na imeziwanye mmekọrịta mmekọrịta nke chatbot na ndị ọbịa mkparịta ụka.
Ntuziaka maka Nzuzo Mkparịta ụka
a ozi sitere na Landbot, usoro ikpo okwu nkata na-elekwasị anya na nhazi mkparịta ụka, na-agụnye atụmatụ, amụma, na mmezu nke atụmatụ oke mkparịta ụka.
Nhazi mkparịta ụka na-etinye ederede ederede, ọdịdị olu na nke ọdịyo, ahụmịhe onye ọrụ (UX), mmegharị ngagharị, mmekọrịta mmekọrịta, na nhazi anya. Ọ na-agagharị site na ogidi atọ nke mkparịta ụka mkparịta ụka:
Kpụrụ na-emekọ ihe ọnụ - imekọ ihe ọnụ n'etiti chatbot na onye ọbịa ahụ na-enyere iji nkwupụta okwu na ụzọ mkparịta ụka mkparịta ụka wee kwalite mkparịta ụka ahụ.
Tụgharịa-Inweta - ntụgharị oge na-aga n'etiti nkata nkata na onye ọbịa ahụ dị mkpa iji dozie okwu edoghị anya na inye mkparịta ụka dị mma.
onodu - mkparịta ụka na-asọpụrụ ọnọdụ anụ ahụ, nke uche, na ọnọdụ nke onye ọbịa ahụ metụtara.
Iji hazie nkata gị, ị ga-:
Kọwaa ndị na-ege gị ntị
Kọwaa ọrụ na ụdị chatbot
Mepụta gị chatbot persona
Gosipụta mkparịta ụka ya
Dee ederede nkata gị
Iji mezuo mkparịta ụka dị mma n'etiti bot na onye ọbịa, enwere njirimara interface njirimara dị mkpa - gụnyere ekele, ajụjụ, nkwupụta ozi, ntụnye, nkwenye, iwu, nkwenye, mgbaghara, akara ngosi okwu, njehie, bọtịnụ, ihe ọdịyo na ihe ngosi.
Nke a bụ ozi infographic zuru ezu… Nduzi Kachasị Nhazi Nhazi:
Landbot nwere nkọwa nkọwa zuru oke banyere otu ị nwere ike isi kwadebe ma tinye nkata gị na saịtị gị.
Guo Landbot's Full Article Na Echiche Mkparịta ụka
Isi vidiyo Landbot
Landbot na-enye ndị azụmaahịa ikike iji chepụta ahụmịhe mkparịta ụka ọgaranya UI ọcha, arụmọrụ na-arụ ọrụ na arụmọrụ, na ezigbo oge njikọta.
Ebe nrụọrụ weebụ na-akparịta ụka Landbot si ike, mana ndị ọrụ nwekwara ike iru bots WhatsApp na Facebook Messenger.
Gbalịa Landbot Taa
Ngosi: Abụ m mmekọ Landbot.
Tags: Mgbakwunyebotnkatachatbot imewechatbot atụmatụnkata uichatbot ọrụ interfaceonodumkparịta ụkamkparịta ụkaekwenye ụkpụrụonye ozi facebookichi obodo
Jiri WordPress 'Internal Site Search ikike jiri Jetpack's Advanced Search
Nzọụkwụ 6 iji nweta Platform Data Customer (CDP) Inye Withlọ Gị C-Suite